Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ nke Na-adịghị Ekepụta Ihe Akụkọ
LB na-egosi Full Story nke onye kacha mara aha ya; "Dee". Anyị Troy Deeney Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe mgbaru ọsọ ya isi ike mana ma ole na ole tụlee Troy Deeney's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ Nke Na -Ndụ mbido
A mụrụ Troy Matthew Deeney na 29th ụbọchị December 1988 na West Midlands, Birmingham, England. A mụrụ ya nne ya bụ Emma Deeney na papa, Paul Anthony Burke. Troy toro na Chelmsley Wood. Ọ bụ otu n'ime ụmụaka atọ mụrụ ndị mụrụ ya, bụ ndị kewapụrụ onwe ha mgbe ọ bụ 11 afọ. Ihe ha na-ekewa ama bu mmalite nke ihe njo di egwu dika esi akowa ya na nwata.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọbụna mgbe ọ dị afọ 14, egwuregwu amaliteghị Troy. Mgbe ndị mụrụ ya kewara, ihe mgbaru ọsọ ya bụ iji mechaa agụmakwụkwọ ya. Nke mbụ bụ, a chụpụrụ Troy n'ụlọ akwụkwọ mgbe ọ bụ 14, tupu ọ laghachi na 15. Ihe mgbaru ọsọ ya nke inweta agụmakwụkwọ aghara agwụghị. Ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ na 16 n'enweghị GCSE ma malite ọzụzụ dị ka briklayer, inweta £ 120 n'izu.
Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ Nke Na -Na-eto Eto
Mgbe ọ na-ele akwụkwọ anya abụghị ọkpụkpọ ya, Troy kpebiri ịgba bọlbụ dị ka ihe ikpeazụ. Mgbe o mechara mee ọtụtụ ngwa, ọ kpọrọ ya Aston Villa agụmakwụkwọ na-ekere òkè na ikpe ụbọchị okpomọkụ ụbọchị anọ na-ele anya ị nweta nkwekọrịta onye ntorobịa. Otú ọ dị, ọ tụfuru ụbọchị atọ mbụ. Nke a mere ka ụlọ ọrụ ahụ nwee mmechuihu n'ihi na ha enyeghị ya nkwekọrịta ọ bụla.
Otú ọ dị, n'agbanyeghị nhụsianya nke Villa, obere ụlọ Chelmsley Town bụ onye ọ na-achọbu maka ịnakwere ya. Mgbe Chelmasley, Walsall Head of Youth Mick Halsall nọ na-achọ ya, bụ onye na-aga na egwuregwu Deeney na-egwu egwu n'ihi na nwa ya nwoke na-egwuri egwu nakwa n'ihi egwuregwu ahụ e mere ka ọ gaa ka a kwụsị ya.
Deeney na-egwu egwu mgbe ọ na-egbu mmanya ma na-atụle ihe mgbaru ọsọ asaa na mmeri 11-4. E nyere onye aṅụrụma ahụ ozugbo ikpe na Walsall mana ọ gara mgbe onye nlekọta Chelmsley kpọpụtara ya n'ụra ma kwụọ ụgwọ maka tagzi ya.
Okwubata nke Chris Hutchings dị ka onye njikwa jikọtara Deeney ịchọta ihe mgbaru ọsọ. Dị ka onye na-achọsi ike na-achọ inwe ihe ịga nke ọma, Deeney na 4th nke August 2010, nyere ya ka ọ bụrụ na ọ chọrọ mmasị site n'aka ọtụtụ ndị na-agba chaa chaa. Ọ bụ Watford onye nwetara ihu ọma na mbinye aka ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ Nke Na -Akụkọ Mkpọrọ Mkpọrọ
Na 25 June 2012, a mara Deeney mkpọrọ maka ọnwa iri maka ịgba mmadụ isi n'isi mgbe ọ na-agba ụra. A tọhapụrụ ya mgbe ọ nọsịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa atọ nke ahịrịokwu ahụ, mgbe o gosipụtasịrị mwute ya, na eziokwu ahụ bụ na ọ bụ onye mbụ mejọrọ. Kemgbe a tọhapụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ na 2012, ọ nwetara GCSEs na Bekee, Science na Maths.
Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ Nke Na -Mmekọrịta na Ndụ Ezinụlọ
Deeney lụrụ nwunye ya mara mma, Stacey Deeney. O nwere nwa nwoke, Myles, na nwa ya nwanyị, Amelia.
Troy Deeney anọwo na nchịkọta onwe ya nke aka ya megide Arsenal mgbe ọ gbasaara n'ihu ọha na nwa ya nwoke bụ onye na-akwado Arsenal. Nwatakịrị a na-ese onyinyo ya na-enweghị ihe mere ọ ga-eji kwụsị njirimara onwe ya maka Arsenal.
Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ Nke Na -Ndụ nke Onye
Troy Deeney nwere àgwà ndị a n'àgwà ya.
Ike Troy Deeney: Ọ dị ugbu a karịa mgbe ọ bụla. N'aka nkea, a na-enye ya ntaramahụhụ, nwee njide onwe onye na ugbu a onye ndu.
Nsogbu Troy Deeney: Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme ihe na-amasị ya-ya-niile. O nwere ike ịbụ onye na-enweghị mgbagha ma na-atụ anya oge kachasị njọ.
Ihe na-amasị na ihe na-adịghị amasị: Ọ hụrụ ezinụlọ ya n'anya, ọdịnala ya. Troy bụ onye nwere ike ịmasị ihe niile n'oge ụfọdụ.
Na nchịkọta, Troy Deeney bụ onye na-adịghị ahụkebe. Ọ nwere ọnọdụ nke onwe ya nke na-enyere ya aka inwe ọganihu dị ukwuu na ya na ndụ ọkachamara. Ebe ọ bụ na mgbe ọ gasịrị n'ụlọ mkpọrọ, Troy aghọwo njide njide onwe onye ugbu a. O nwere ike iduzi ụzọ, si otú ahụ na-eme atụmatụ zuru ezu na ezi uche maka ndụ ya na nke ezinụlọ ya.
Ụmụaka Troy Deeney Akụkọ Nke Na -Ndụ Ezinụlọ
Ndị nne Troy Deeney mechuru ya ihu n'ihi na ha enweghị ike ibikọ ọnụ n'otu oge ọ kachasị ha mkpa. O doro anya na o si n'ezinụlọ ndị dị n'etiti n'etiti ụlọ.
NNE: Nwa nwanne Troy, bụ Ellis, bụ onye na-egwu egwuregwu na-ahụ maka ịgba egwu nke na-arụ ọrụ dị ka onye etiti obodo. Ellis malitere ọrụ ya na Aston Villa, ebe ọ bụ onye isi nke otu ụlọ ọrụ mmuta ha tupu a tọhapụ ya.
Taa, Ellis bụ onye na-enye ọzụzụ onwe ya, Deeney nyekwara aka kwado ọzụzụ ya na ọrụ ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Troy Deeney Child Story tinyere akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.